Thai Monastery Wat Na Pa Pong dia miankina amin'ny NewTek TriCaster® sy NDI® handefa fampianaran'ny bodista tsy manam-potoana | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Content Creation » Thai Monastery Wat Na Pa Pong dia miankina amin'ny NewTek TriCaster® sy NDI® handefa fampianaran'ny bodista tsy manam-potoana
Ny monasitera dia tsy mampiasa afa-tsy fampitaovana tsara indrindra hizarana ny fampianarany, ny fitokisany NewTek ary NDI® ho an'ny horonan-tsary
Wat Na Pa Pong dia monasiteran'ny Buddhist Theravada, any avaratra atsinanan'i Bangkok, ao amin'ny faritanin'i Pathum Thani any Thailandy. Ny Ajarn Kukrit Sothipalo hajaina dia mitarika ny monasitera ary mino ny mianatra, mampihatra ary manambara manokana avy amin'ny tenin'ny Buddha - fomba fanao fantatra amin'ny hoe Buddhhawajana. Mba hanampiana amin'ny asa fitoriana, Wat Na Pa Pong dia mampiasa teknolojia maoderina maro.
Ny tranonkala, ny rindranasa finday ary ny atiny video dia mamela ny mpanaraka - sy ireo liana amin'ny monasitera sy ny fampianarany - hifandray amin'ny Internet haingana. Izany dia nilaza fa ny rafitry ny analog amin'ny fandraketana sy ny fandefasana horonantsary dia nitolona tamin'ny kalitaon'ny sary. Mba hanarenana izany toe-javatra izany dia nitodika tany Wat Na Pa Pong NewTek ary NDI®.
Ny zavatra tsara indrindra
Ny lohan'ny Wat Na Pa Pong dia nilaza fa NewTek Ny rafitra dia nanana fenitra avo lenta hihaona satria mandà ny hipetraka na inona na inona ny monasitera afa-tsy ny fampitaovana tsara indrindra hizara ny fampianarany.
"Rehefa manao zavatra momba ny Buddha isika dia misafidy ny zavatra tsara indrindra," hoy i Ajarn Kukrit. “Rehefa manonta ilay boky izahay dia ny taratasy tsara indrindra ihany no ampiasainay. Ireo fampianarana ireo dia hampitaina amin'ireo olona mampiasa teknolojia mandroso. Mieritreritra izahay NewTek manana ny fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny haitao tsara indrindra amin'izao fotoana izao. ”
“Tsy manam-pahaizana amin'ny IT sy ny gadget aho, fa afaka mifandray amin'ilay NewTek rafitra mora, "hoy i Ajarn Kukrit. “NewTekNy endriny dia manamora ny fandefasana na aiza na aiza, amin'ny fotoana rehetra. Afaka manome toriteny na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao aho. ”
ICamplus Co., Ltd., NewTekmpiara-miasa ao Thailandy, niara-niasa tamin'ny monasitera mba hamolavola workflow mifototra amin'ny NewTek TriCaster® Fakan-tsarimihetsika TC1 sy NDI PTZ. Ny rafi-pamokarana mivantana TriCaster TC1 dia ahafahan'ny mpamorona mifindra, mandefa ary mirakitra ao anatiny HD ary 4K UHD 60p raha manolotra fampidirana Skype teratany - tonga lafatra amin'ny fitondrana ireo mpiantso lavitra anaty horonan-tsary. Izy io koa dia ahafahan'ny streaming mivantana mivantana amin'ny fantsona Facebook Live, Microsoft® Azure®, Periscope, Twitch, YouTube ™ Live, ary maro hafa.
Ny Shift mankany IP
Mandritra izany fotoana izany, ny fakantsary NDI PTZ dia tsy mila afa-tsy fifandraisana Ethernet tokana ho an'ny fananganana, herinaratra, fandidiana ary fantsom-pifandraisana. Ny fakan-tsary dia mifangaro miaraka amin'ny TriCaster ho an'ny traikefa NDI tsy misy configure ary tsaratsara kokoa noho ny fahatsapana fampielezam-peo.
Mampifamatotra ny rafitra ny kaonty NDI video-over-IP, miaraka amin'ireo signal video rehetra alefa eo anelanelan'ny fitaovana amin'ny tambajotra. Ny NDI afaka ampiasaina dia mamela ny olona sy ny fikambanana hiditra amin'ny tombotsoan'ny fitantarana an-tsary mifototra amin'ny rindrambaiko mifototra amin'ny rindrambaiko IP ho an'ny ampahany kely amin'ny vidin'ny protokolona IP hafa na ny fomba fitaterana video nentim-paharazana.
Ny monasitera koa dia mampiasa fitaovana NDI maimaim-poana ampiasaina, izay azo sintonina avy www.NDI.tv. Fitaovana toy ny NDI Scan Converter, NDI Studio Monitor, ary NDI Virtual Input dia mamela ny fampidirana eo anelanelan'ny TriCaster sy solo-sainanao manokana - ahafahan'ny mpamorona manampy haingana sy mora ny atiny media na horonantsary ivelany amin'ny vokatra.
Mampiasa ny rindrambaiko NDI-HX Capture ilay monasitera - izay azo alaina amin'ny fitaovana iOS na Android - hamela ny efijery fakana sary mivantana avy amin'ny fitaovana finday sy ny app NDI-HX Camera hanisy loharano video misy kalitao avo lenta amin'ny famokarana.
Ny fametrahana NDI feno dia ahafahan'ny Wat Na Pa Pong mandefa atiny amin'ny feed Facebook telo, fantsona YouTube telo ary feed RTMP iray isan'andro.
Vakio ny tantara feno momba NewTek, NDI ary Wat Na Pa Pong ary jereo ny horonantsary Eto.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny NewTek ary ireo vokatra vaovao ireo, tsidiho azafady www.newtek.com.
NewTek no mpitarika ny teknolojia lahatsary IP izay manome feo isaky ny mpivezivezy amin'ny alàlan'ny horonantsary. Miara-miasa amin'ny Channel Partners voafidy manerana izao tontolo izao mba hitondra vahaolana mahomby amin'ny tsena, NewTek manome hery ny mpanjifa hampitombo ny mpihaino, marika ary orinasa haingana kokoa noho ny teo aloha. NewTek ny vokatra dia mifototra IP-centric amin'ny alàlan'ny NDI®.
NewTek dia ao anatin'ny Vizrt Vondrona eo anilan'ny marika anabaviny, Vizrt ary NDI. NewTek manaraka ny tanjona tokana an'ity vondrona ity; tantara maro kokoa, nambara tsara kokoa. www.newtek.com
Previous: Mpanolo-tsaina amin'ny varotra - Ekipa mpivarotra iraisam-pirenena
Next: Olona marary iray mifangaro amin'ny KRK Studio Monitors